Ukuzalwa kwezinja Toy Terrier
Uhlobo lwe-Toy Terrier lwakhiwa eMoscow phakathi ne-50s yekhulu lama-20. Ama-cynologists aseRashiya aye azibekela umqondo wokuletha umfanekiso wesibhakabhaka saseBrithani, okwathi ngemuva kwe-Okthoba Revolution yaba yiphutha kuleli zwe. Ngenxa yokuhlanganiswa ngokuphumelelayo kwezinja ezincane ezibomvu ezibomvu, kwakuthola uhlobo oluhlukile kakhulu kumlingani walo wangaphandle. Kusukela ngo-2006, izinja zeRussia i-toy terrier seziye zaziwa ngokujwayelekile, futhi ngo-2016 kuhlelwe ukusekela ngokusemthethweni lezi zinhlobo eziyingqayizivele zezilwane.
I-Terrier Toy ibukeka ini?
Kunezinhlobo eziningana ze-terrier yaseRussia:
Isikwele eside. Umzimba ugcwele izinwele ezide ngokulinganayo, ezingafihli umjikelezo womzimba. Ekhanda, emilenzeni nasezinyaweni zemilenze, ingubo ihambisana ngokuqinile. Izindlebe zimbozwe ngoboya obunzima obufana ne-fringe.
I-smooth-haired. Ingubo ihambisana ngokuqinile emzimbeni. I-Zalysin ne-undercoat ayitholakali. Ngesikhathi sebusika siyahamba kunconywa ukuthi kuthuthukise inja ngezigcawu ezikhethekile. Esimweni esihlukile, isilwane singase sigwede.
Inja enamandla kakhulu futhi edlalwayo. Kuthengiselwe inkosi, kulula ukuxhumana nabanye. Inokumelana nokucindezeleka okuphansi, ngakho-ke akufanelekele imindeni enezingane ezinomsindo. Kuzo zonke izibuko zalo "zokudlala," isilwane siyindawo ejwayelekile, njengoba kubonakaliswa ngumlingiswa wayo - isimo esivumelanisiwe esihlangene namandla angakhathali yikhadi elivakashele ithoyizi laseRussia.
Ukunakekela inja ye-Toy Terrier
Lena inja yeklasi "yefulethi" , engadingi ukunakekelwa okukhethekile. Ujwayele ukujwayela i-tray, akudingi ukugeza ngamasonto onke. I-toy-terrier akudingeki ihambe nsuku zonke, kodwa kubanda kakhulu kungcono ukuyishiya ekhaya. Ububele obude obude kufanele buhlanganiswe ngezikhathi ezithile ngekhekhe elikhethekile.
Ukudla Cat Cat Ukudla - indlela yokukhetha ukudla okulungile?
Ungadla kanjani i-puppy - inyanga engu-1?
I-Otitis ezinja - izimpawu kanye nokwelapha
Ukudla ezinja ezincane
Ikati linemphumulo eyomile: ingabe kufanelekile ukukhathazeka?
Izinhlanzi ezibomvu - indlela yokunquma yobudala nobulili?
Isilinganiso sokudla kwenja eyomile
Yini ongayidla isiphuphu?
Isifo sikashukela sinamakati - izimpawu
Amagundane okuhlobisa - ukunakekelwa nokugcinwa, ikakhulukazi amagundane abambe ngesandla
Unogwaja unesifo sohudo, okumele ukwenze - izincomo zokunakekela ezisebenzayo
Igazi emcimbini wezinja imbangela
Kungani amahlumela amakati?
Izifo ze-Chromosomal - uhlu lwamathologi avame kakhulu nezimbangela zabo
Umlutha wothando - izinketho eziphumelela kakhulu
Ingabe ifilimu ikhulisa isisindo semithwalo?
Amabhuku wabesifazane abakhulelwe
Amakha amafashini 2013
UNatalie Portman ukholelwa ukuthi u-Ashton Kutcher ku-movie ethi "Ngaphezu kocansi" yayinemali ephakeme kakhulu
UMark Zuckerberg noPriscilla Chan bagubha usuku lokuzalwa lwendodakazi yakhe
Indwangu ye-Pavlovskaya kerchiefs
Izithelo zommbila ezimnyama - okuhle nokubi
Iseva - imiyalelo yokusetshenziswa
Ngemuva kokuthi "Superbowl 2018" wonke umuntu ukhuluma ngokukhulelwa kuka-Irina Sheik
Ungathandwa kanjani ku-instagram?
Goulash kusuka enkomeni ngesitayela sesiHungary - zokupheka ezingu-8 zesidlo esimnandi nesinomsoco
Iziteketiso zaseRussia zezinja zabafana
Ama-backpacks amafashini amantombazane 2016
Usuku lomndeni, uthando nokuthembeka - umlando weholide
Isiphambano kusuka ebuhlalu
Amandla othando ukubhula
I-Ballet Flats I-Loriblu
Imifino ibhaka kuhhavini - iresiphi